VMware amin'ny telefaona finday, Android ary Windows Mobile miaraka amin'izay | Androidsis
VMWARE AMIN'NY MOBILE, ANDROID ARY WINDOWS MOBILE amin'ny fotoana mitovy
VMware dia orinasam-boninahitra ekena eo amin'ny sehatry ny rindrambaiko virtoaly virtoaly miasa, izany hoe ny fahefana hametraka sy hampandeha rafi-pandaminana iray ao anatin'ny iray hafa amin'ny alàlan'ny rindrambaiko. Hatreto, ity saha amin'ny solosaina birao na solosaina finday ity dia mianatra tsara ary ankehitriny dia saika ny rafitra fiasa rehetra dia azo apetraka sy ampiasaina ao anatin'ny rafitra mpampiantrano.
Vwmare te handroso lavitra izy ary ny ataony dia mitovy fa amin'ny finday. Hanana rafitra toa izany isika Android na Windows Mobile apetraka amin'ny fitaovana iray ihany ary afaka mampiasa ilay tadiavintsika. Toa efa nahavita azy io tamin'ny orinasa ny orinasa saingy mbola manana izany mandra-pahatongany hamidy azy, izay antenain'izy ireo fa hitranga amin'ny taona 2012. Ny hevitra dia ny afaka manova ny rafitra rehefa manova birao ao amin'ny Android ary afaka miantso amin'ny alàlan'ny Windows Mobile ary mifandray amin'ny Internet miaraka amin'ny browser an'ny Iphone Os.
Raha tratra io dia mahavariana ny fananana an'io fahafaha-manao io, na dia zavatra iray hafa aza ny fivarotana ny rafitra fikirakirana finday satria amidy ny rafitra PC ankehitriny. Ahoana ny hevitrao momba ilay hevitra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » VMWARE AMIN'NY MOBILE, ANDROID ARY WINDOWS MOBILE amin'ny fotoana mitovy
kihosap dia hoy izy:
tonga lafatra, izao dia tsy maintsy jerentsika amin'ny alàlan'ny finday ny hery omen'izy ireo an'ireo fitaovana vaovao ireo ..., satria tsy ny rehetra no handeha ...
Mamaly an'i kihosap
ULTIMATEFAVES, DESROOTRA ANDROID ATY 3D CAROUSEL